उद्याेगमन्त्री यादवका पीए र सल्लाहकारकाे सरकारी गाडीमा मस्ती | Makalukhabar.com
उद्याेगमन्त्री यादवका पीए र सल्लाहकारकाे सरकारी गाडीमा मस्ती
बैशाख ३१, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पदको दुरुपयोग गर्दै तीन वटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार मन्त्री यादवले आफ्नै नाममा तीन वटा गाडी लिएका छन् । उनले आफ्नो नाममा तीनवटा गाडी लिएको तथ्यांकमा देखाएपनि आफ्ना आसेपासेलाई चढ्न दिएका छन् । बा २ झ १०७३ नम्बरको सोनाटा कार, बा २ झ २३४६ नम्बरको टाटा स्ट्रोम जीप र बा २ ज ३०९१ नम्बरको टोयोटा रेफो मन्त्री यादवले प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकै मन्त्रीलाई ३ वटा गाडी किन ?
आवश्यकताकै कारण मन्त्रीले तीनवटा गाडी प्रयोग गरेको मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका सहसचिव पुष्पराज शाहीले दावी गरे । तर, मन्त्री यादवले आफ्नो नाममा लिएको तीन मध्ये एक वटा मात्र गाडी चढ्ने गरेका छन् । बाँकी २ वटा गाडी आफू निकटकालाई चढ्न दिने गरेका छन् । ‘एकै जनालाई तीन वटा गाडी किन चाहियो ? उनका आसोपासेले सरकारी गाडीमा मस्ति गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री यादवले आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगीको नाममा समेत सरकारी गाडी दिलाएका छन् । सल्लाहकार विश्वप्रकाश सुवेदीले बीएए ३९७३ नम्बरको गाडी चढ्छन् ।
मन्त्री यादवले संसदको निर्देशन टेरेनन्
यसअघि व्यस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको विवरण माग गर्दै सरकारी गाडीको दुरुपयोगप्रति चासो देखाएको थियो ।
सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन मापदण्ड नभएकाले दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले विवरण माग्दै दुरुपयोग रोक्न आग्रह गरेपनि उद्योग मन्त्रीले भने संसदलाई टेरेका छैनन् ।
लगानी सम्मेलनमा अंग्रेजी बोल्न नसकेर विवादमा परेका उद्योगमन्त्री यतिबेला निराश भएर बसेका छन् । दिनप्रतिदिन नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशमा महंगी बढ्दो छ । आन्तरिक उत्पादकत्व कमजोर भएको हुँदा नुनदेखि सुनसम्म, धनीयाँ देखि टमाटरसम्म विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध नहुँदा मन्त्रीपद मात्रै ओगटेका यादवलाई आफ्नै कार्यकर्ता र सल्लाहकारको सरकारी गाडी मोहले अर्को टेन्सन थपिएको छ ।
पुरुष गोरो र सुन्दर हुन यी उपायहरु अपनाउनुहोस्